Wasiirro hore uga Tirsanaa xukuumada Puntland oo Jawaab ka bixiyay Hadalkii Madaxweyne Gaas | SAHAN ONLINE
Wasiirro hore uga Tirsanaa xukuumada Puntland oo Jawaab ka bixiyay Hadalkii Madaxweyne Gaas
LONDON –Wasiirkii hore ee wasaarada dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland C/laahi Jaamac Saalax iyo Wasiirkii hore ee Duulista hawada iyo garoomada Xasan Xaaji Siciid ( Xasan Cadde) ayaa qoraal ay si wadajir ah u soo saareen waxay kaga jawaabeen Hadal uu madaxweynaha Puntland ka jeediyay Kulan ka dhacay Beerta Rays ee magaaladda Boosaaso toddobaadkii hore.
Madaxweyne Gaas oo toddobaadkii hore oo ka hadlayay madal ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada Boosaaso, waxaa uu ku eedeeyay mid ka mid ah wasiiradiisii hore oo uusan magacaabin inuu warqad u diray Shirkadda shiinaha ee CCECC oo hore u dhistay garoonka Boosaaso, haatana la filayo inay mashaariic ka bilowdo Puntland
Jawaabta wasiirada ayaa u qornayd sidatan:-
GAAS OO CAY & BEEN KU WAASHAY MARKII WAQTIGII KA DHAMMAADAY:
Markii uu odaygu ku fashilmay hoggaankii Puntland oo ay u socon weydey siyaasadiisii ku dhisnayd beenta, khiyaamada, tuugada, qabyaaladda, iyo laaluushka, ee waqtigiina ka dhammaaday ayuu la soo baxay farsamooyin naf la caari ah, isagoo qiiq isku qaladaadkiisii, taas oo aad uga muuqatey khudbadiisii uu shalay ka jeediyey Rays Bosaaso.
Wuxuu isku deyey inuu dadka midaysan ee reer Boosaaso isku diro oo kala qaybiyo, isagoo qaarkood caayaya qaarkoodna ammaanaya.
Wuxuu isku deyey inuu been cusub reer Bosaaso ku maaweeliyo oo ku yiraahdo haddaan wax idiin qabanayaa markii waqtigii ka dhammaaday.
Wuxuu isku deyey inuu marmarsiinyo u helo fashilkii kaga dhacay dhismihii garoonka Gaalkacayo, markii ay shirkaddii dhisilahayd isku afgarwaayeen Danihiisa gaarka ah oo ay ka midtahay inuu u diidey shirkadii inay ka dhisaan garoonka meeshii ku habboonay ee xagga bariga ka xigtey laamiga dheer sabab qabiil awgeed isgoo tolkii u kala eexanaya, meelo kalena ku khasbaya shirkada.
Wuxuuna isku deyey inuu ku been abuurto Wasiirradii shaqada laga beddeley ee abaal marinta mudnaa, eeddana uu iyaga saaro.
Laakiin waxay Wasiirradu halkan ugu sheegeyaan inay hayaan xog badan iyo caddaymo badan ee muujinayaa khiyaamada iyo dembiyada uu dalka iyo dadka ka galay, Maxkamadna lagu soo taagi karo, waqtiga ku haboon.
“Waa lax indha la’ oo libaax eryanaysa”.
Waxayna Wasiirradu ku leeyihiin “waa inaad ogaatid inaad bilaabay dagaal gardarro ah, adiga oo dhiiqo lugaha kula jira”. Mar dhow ayaana dadweynaha sharafta leh ee reer Puntland usoo bandhigaynaa dhagaraha iyo hagardaamada aad kula kacay, adiga ayeyna kugu soo noqon doontaa arrintaasi, waadna eedi doonaa beenta iyo khiyaamada aad caadaysetey.
Wixii cay ah oo Gaas ku hadlay waxaan ka leenahay “Akhlaadayada u xumaymayno inaa akhlaadaada toosino”.
Qoraalka ay soo saareen labada wasiir, waxay kaloo ku sheegeen inay dhawaan soo bandhigi doonaan qoraalo kale oo xambaaran xogo muhiim ah oo iftiiminaya khaladaad iyo dhibaatooyin ay sheegeen in Puntland la galay 4tii sanno ee u dambaysay.
Labada wasiir ayaa kala jooga magaaladda Boosaaso iyo Magaalada London ee dalka ingiriiska